सञ्जयको सिर्जना : कुदाउने होइन त फोहोरबाटै गाडी !
Sunday,05 July, 2020 | २१ असार २०७७
अपडेटः २१ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np
कर्पाेरेट समाज समाचार
सम्झना घिमिरे काठमाडौं, २८ चैत
के तपाईंलाई थाहा छ ? पुराना भएका र फाल्ने अवस्थाका गाडीलाई २ लाखमै पुनर्जीवन दिन सकिन्छ नि ! त्यति मात्र होइन, अब नचल्ने भनेर थन्क्याएका गाडीलाई तपाईंको घरबाट निस्किएको फोहोरबाट फिलिली कुदाउन सकिन्छ ।
न त पेट्रोल सकिएला भन्ने तनाव, न त नयाँ गाडी किनिरहनुपर्ने झन्झट । यी सबै झन्झटबाट मुक्ति पाइने अनि हाइब्रिड सवारीमा हुइँकिन पनि सकिने, त्यो पनि १ वर्ष मात्रै होइन, १० वर्षसम्म । छैन त आश्चर्यजनक !
यही आश्चर्यलाई यर्थाथमा बदल्न हिजोआज सञ्जय राजभण्डारी निकै ब्यस्त रहन्छन् । उनी मात्र होइन, उनका सहकर्मी गौरव अधिकारीको लगाव पनि उस्तै छ ।
जबजब पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार अनि काठमाडौंका सडक नै ढाक्नेगरी छरपस्ट फ्याँकिएका फोहोर देख्ने गर्छन्, तबतब सञ्जय निकै बेचैन हुन्छन् । उनी विश्वजगतमा हुने गरेका नयाँनयाँ इन्भेन्सन पनि नियालिरहेका हुन्छन्- फोहोरबाट ग्यास बनाउन सकिन्छ, त्यो ग्यासबाट खाना पकाउने, मेसिन चलाउनेदेखि गाडीसम्म कुदाउन सकिन्छ ।
बेलायत र भारतमा यो विधि प्रयोगमा ल्याइसकेपछि भने नेपालमा पनि फोहोर र पुराना गाडीको फ्युजनमा हाइब्रिड सवारी किन नबनाउने भन्ने हुटहुटी चल्न थाल्छ सञ्जय लाई ।
पुल्चोक क्याम्पसमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत सञ्जय यही सोचलाई लिएर आइडिया स्टुडियोसम्म पुगेका छन् ।
सञ्जय को सिर्जना
सञ्जय उपत्यकामा मात्र दैनिक ५ सय टन उत्पादन हुने फोहोरलाई कम्पोष्ट गरेर ग्यास निकाले सामान्य गाडीलाई सस्तोमा नै हाइब्रिड गाडी बनाउने तयारीमा छन् ।
अहिले अध्ययन र अनुसन्धानमा लागिरहेका सञ्जय यो योजनालाई वायो यानको नाम दिएर अगाडि बढिरहेका छन् ।
के हो वायो यान ?
प्राकृतिक स्रोतबाट सञ्चालित सवारी नै वायो यान हो । अर्थात् तपाईं हाम्रो घरबाट निस्किएको फोहोरलाई अर्ग्यानिक रूपमा कम्पोस्ट गरी निकालिएको ग्यासबाट किटको माध्यमबाट पेट्रोल डिजेल जुनसुकै इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई पनि ग्यासबाट चल्नेगरी हाइब्रिड बनाउन सकिन्छ ।
यसरी बायो सीएनजी अर्थात् कम्प्रेस नेचुरल ग्यासको मद्दतबाट हाइब्रिड किट जडान गरी गाडीलाई पुनः नयाँ जीवन दिइन्छ ।
यो पूर्णतः वातावरणमैत्री हुने र सस्तो पनि हुने हुँदा नेपाली वातावरणमा मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्जय को दाबी छ ।
नेपालमा यसको प्रयोग
सामान्यतया यस्ता किसिमका सवारीहरू विदेशमा प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालमा भने यो नौलो प्रयोग हो । भारत र बेलायतमा सफल प्रयोग भइसकेको वायो यानको प्रयोग नेपालमा देखिँदैन ।
तर, नेपालमा यसको प्रयोगलाई बढावा दिँदै वायो यान विस्तार गर्ने हो भने पेट्रोल र डिजेलमा वार्षिक रूपमा खर्बौँ रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिने सञ्जय बताउँछन् ।
हामी हरेक कुरामा छिमेकी देशहरूसँग परनिर्भर छौँ, अझ नुनदेखि सुनसम्मै, उनी भन्छन् गाडी त झनै सबै विदेशबाट मगाउने हो । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी स्रोत साधनको प्रयोग गरेरै सवारी चलाउन सकियो भने त हरेक वर्ष बाहिरिने खबौँ रकम बच्ने भयो । यसले अन्य विकासका कामहरू गर्न सकिन्छ नि ! अनि परनिर्भर हुनुपर्ने समस्याको पनि हल हुन्छ ।
नेपालमा अहिले ५ लाख रूपैयाँबराबरका सवारी साधन हरेक दिन सडकमा गुड्छन् । यदि कुल संख्याको ५ प्रतिशत गाडीलाई हाइब्रिडको रूपमा रूपान्तरण गरे पनि ५ अर्बमा ३ खर्बको व्यापार गर्न सकिने सञ्जय बताउँछन् । एउटा कारलाई हाइब्रिड बनाउँदा २ लाख मात्रै लिने सञ्जय को योजना छ ।
यसरी २ लाखमा नै नयाँ तथा पुराना गाडीलाई हाइब्रिडका रूपमा ढालिने मात्र होइन, हाइब्रिड बनेपछि त्यस्ता गाडी थप १० वर्षसम्म चलाउन सकिन्छन् । यसरी फाइदा बढी भएकै कारण नेपालमा यसको बजार राम्रो हुने सञ्जय बताउँछन् । यसरी बनाइएको हाइब्रिड गाडी सामान्य गाडीभन्दा २ गुणासम्म माइलेज दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले सञ्जय र गौरव अध्ययनमा लागिरहेका छन् । जसका लागि यी दुई जनालाई ७ लाख रूपैयाँको लगानी आवश्यक छ । लगानी तपाईंको, आइडिया हाम्रो ? अनि भएन त बिजनेस, देशलाई पनि हुने, हामीलाई पनि हुने, उनी भन्छन् ।
सञ्जय आइडिया स्टुडियो सिजन– ४ का मेड इन नेपाल राउण्डका प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीसँगै अन्य २ जनाले आफ्ना आइडिया प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने बाँकी ३ जनाले आउने मंगलबार प्रस्तुत गर्नेछन् ।
आइडिया स्टुडियोले नेपालभरका ६ सय जनाबाट ३० जना छनोट गरेर ५ वटा विधामा उनीहरूका तमाम आइडियालाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसरी हरेक विधाबाट एक प्रतिस्पर्धी विजेता बनेकालाई व्यावसायिक सहयोग पनि गर्दै आएको छ । अहिले आइडिया स्टडियोमा २४ जना नवप्रतिभालाई व्यवसायगत तालिम तथा प्रशिक्षण दिइँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २८, २०७६, १३:३०:००
४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट
मेगा बैंक र गण्डकी विकास बैंकद्वारा एकीकृत कारोबार सुरु
६३ सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)
स्प्रेडदर खारेज गरे बैंकको विश्वसनीयता धरापमा पर्ने
मनमोजी योगी, मान्दैनन् कसैको कुरा
भर्चुअल क्वाइन पीआईको नाममा ठगी धन्दा
राहत माग्नेमा साना व्यापारीदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्म
९८ दिनपछि खुलेको बजारमा १६ कम्पनीले कमाए, कसको कति ?
गण्डकीमा ५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १२ सय नजिक
विदेशीलाई नागरिकता र राहदानी दिने प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ
असार २५ पछि नदीको बहाव बढ्ने, सतर्क रहन मौसमविद्को अनुरोध
टुटफुट र विभाजन रोक्न १४ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको संयुक्त अपिल
एयर फ्रान्सले साढे ७ हजार कर्मचारी हटाउने
विश्वभर कोरोना जित्नेको संख्या ६० लाख नाघ्यो